လူ့အဖြစ်ကို ရခဲခြင်းနှင့် လူဦးရေတိုးပွားလာရခြင်း၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူ့အဖြစ်ကို ရခဲခြင်းနှင့် လူဦးရေတိုးပွားလာရခြင်း၊
လူ့အဖြစ်ကို ရခဲခြင်းနှင့် လူဦးရေတိုးပွားလာရခြင်း၊
Posted by meengelay on Jul 6, 2011 in Copy/Paste |7comments
From : http://www.ywarookyaung.blogspote.com
အခုက လူတွေလည်းများလာတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေလည်း များလာတယ်။ သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခု မဟုတ်လားဘုရား။ သတ္တ၀ါတွေ တိုးပွါးလာဖို့အတွက် အဲဒီကံတရားတွေက ဘယ်ကနေတိုးလာတာလဲဘုရား။ ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်အောင် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် ဘုရား။
နဂိုရှိတဲ့ လူတွေက ကုသိုလ် ကံကြောင့် အထက်ဘုံကို ရောက်သွားမှာ ရှိသလို အကုသိုလ်ကံကြောင့် အပယ်လေးဘုံ ဆင်းသွားမှာလဲ ရှိတယ်
အထက်ဘုံက ကုသိုလ် အကျိုးပေး ကံကုန်လို့ လူ့ပြည်ကို ပြန်ရောက်တာ ရှိသလို
အောက်ဘုံကနေ အကုသိုလ် အကျိုး ကုန်သွားလို့ ပြန်တက်လာတာလဲ ရှိနေမှာ
မြင်သာထင်သာ တိရစ္ဆာန်တွေ များလာတာတွေ့တော့ အကုသိုလ်အကျိုးပေး ငရဲက လွတ်ပြီး တိရစ္ဆာန်တွေ အဖြစ် မြင်နေရတာ ဖြစ်မှာ ..
အသူရကာယ် ပြိတ္တာကတော့ ကိုယ်ထင်ပြတဲ့အခါက လွဲလို့ မတွေ့တတ်ဘူးလေ
လူတွေ များလာတာက အထက်က ပြန်ဆင်းလာတာလား .. အောက်က ပြန်တက်လာတာလားပေါ့ ..
မိမိနေထိုင်ရာအိမ်မှာပင် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြသော ချ၊ခြင်၊ယင်၊ပုရွက်ဆိပ်၊ပိုးဟပ်စသော ပိုးမွားတိရစ္ဆာန်များနှင့်အိမ်ရှိနေထိုင်ကြသော လူ အဘယ်ကပို၍များသည်ဟုထင်ပါသနည်း။
ဘုန်းကြီး၊ရဟန်းများသည်ပင် ဤသုဂတိဘုံသို့ ပြန်ရောက်ရန်အင်မတန်ခဲရင်းပါသည်။ဘုန်းကြီးရဟန်းသည်လည်းရဟန်းတို့၏ကျင့်ဝတ်သီလ၊သမာဓိနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါမည်။လူသည်လည်း လူုကျင့်ဝတ်၊သီလ၊သမာဓိ၊ဘာဝနာ တရားများအားထုတ်နိုင်မှသာလျှင် အပ္ပါယ်လေးဘုံမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါမည်ဟု ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များမှ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ငရဲပြည်က လိုင်စင်မဲ့ သတ္တ၀ါတွေ တိရိစ္ဆာန်လာဖြစ်.. သေသွားတဲ့ အကောင်တွေ ငရဲပြည်ဆင်း
နတ်ပြည် ဗြဟ္မပြည်က လိုင်စင်မဲ့ သတ္တ၀ါတွေ လူပြည်ဆင်း ဒါန သီလ ကောင်းတဲ့ လိုင်စင်ရ လူတွေ အပေါ်တက်.. အဲလိုနဲ့ တက်လိုက် ဆင်းလိုက် လည်ပတ်နေတာပါကွယ်။
အဲဒါက သံသရာဆိုတာနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ လူရယ်လို့ ဟုတ်တိပတ်တိဖြစ်လာ ထွန်းကားလာတာ ကမ္ဘာသက်နဲ့ရှင်ရင် မကြာသေးဘူးလေ၊ စတြာဝဠာသက်နဲ့ဆို ပမွှားလေးပဲရှိမှာပေါ့၊ အဆုံးအစမဲ့ သံသရာစက်ဝန်းမှာတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ လူမရှိခင်ကာလမှာ သတ္တဝါတွေက ၃၁ဘုံထဲက အခြားဘုံတွေမှာ ရှိနေတာလေ။ သင်္ချာနည်းနဲ့ပြောရင် အောက်ကပိုင်းခြေဂဏန်းကြီးလာလေ အပေါ်ပိုင်းဝေဂဏန်းသေးသွားလေပဲလေ၊ နောက်ဆုံး အင်ဖင်န်နတီဂဏန်းကို ရောက်သွားတာပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေမှာဆိုထားတာ ကမ္ဘာဖြစ်၊ ဖြစ်ဆဲ၊ ဖြစ်ရာမှပြန်ပျက်၊ ကမ္ဘာပျက်ဆိုပြီးလား မသိဘူး အချိန်အပိုင်းအခြား လေးခုရှိတယ်။ အခုအချိန်က ဆုတ်ကပ် ကမ္ဘာဖြစ်ပြီးလို့ပျက်နေတဲ့ကာလပေါ့။ ပိဋကတ်မှာတော့ ကမ္ဘာတခုပျက်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာသလဲဆိုရင် အလွန်နူးညံ့တဲ့ ကမ္ဗလာအထည်စနဲ့ ယူဇနာတရာ အလျားအနံရှိတဲ့ ကျောက်တုံးကို နှစ်တရာကြာတိုင်း တခါပွတ်လိုက် ကျောက်တုံးကြီး ပွန်းပျောက်သွားရင်တောင် ကမ္ဘာမပျက်သေးလို့ အဆိုရှိတယ်။ အဲဒီကာလတခုမှာ လူသတ္တဝါဖြစ်လာသူ အရေအတွက်နဲ့ လူသတ္တဝါမဖြစ်ကြသူ အရေအတွက် ဘယ်သူကပိုများမလဲ၊ တခါ လူဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ ကာလနဲ့ လူရယ်လို့ ဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အချိန်ကာလ ဘယ်ဟာက ပိုများမလဲ။ ဒီလိုတွေးရင် မနုသတ္တ ဒုလ္လဘ ရခဲခြင်းဆိုတာ ဖြစ်နိုငတယ်လို့ ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်….
လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်.. လူ့ဘ၀က ကုသိုလ် တရား၊ ဒါနတရား၊ ဘာဝနာ၊ သီလတရား အဆောက်တည်နိုင်ဆုံး အပွားများနိုင်ဆုံး နေရာတစ်ခုပါ.. တိရစ္ဆာန်များမှာတော့ ကုသိုလ်မသိ အကုသိုလ်လဲ မသိ အတိ ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်. နတ်ပြည်ကျပြန်တော့လဲ နတ်စည်းစိမ်များနဲ့ ကုသိုလ်တရား၊ ဘာဝနာတရားများ၊ ဒါနတရားများ ဖြစ်ဖို့ အားနည်းပါတယ်.. ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀မှာတော့ အဲဒါတွေ ရနိုင်တာမို့ ကုသိုလ်ရေးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်.. မန်းဂေဇက်က လူတွေစုပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါ ပရဟိတ လုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်စေချင်ပါတယ်.. တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုသလိုမျိုးပေါ့ မန်းဂေဇက် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လှူတာမျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..
ထော်လော်ကန့်လန့် အမြဲ တွေးတတ်တဲ့ etone ..
သေပြီးလျှင် ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ …သိကိုမသိချင်ဘူး … … ရောက်ချင်တဲ့ဆီရောက်ပါစေတော့ ။
ဘဝသံသရာာာာာာ ( ဦးသုခ )